Ukuphindaphindwa kwe-GIS 9… ngokukhawuleza - iiGeofumadas
Ikhaya/GIS asibonise/I-GIS 9 ... Ngokukhawuleza
Namhlanje ngo-Matshi i-16 ephindaphindeneyo yenze ukukhutshwa kweendaba, apho athetha khona ngokubaluleka kwento ayithathayo u-9 wemveliso yakhe. Ngokwento abayithethileyo, i-Manifold GIS 9 izakuya kwintengiso kwisiqingatha sokuqala sika-2009, kunye noChris C.
Ingakanani iindleko ze-Manifold 9
Ngokokukhutshwa, ukuphuculwa ukusuka kwi-Manifold 8 ukuya kwi-Manifold 9 kuya kuhamba phakathi kwe- $ 50 kunye ne- $ 100. Bakhankanyile ukudityaniswa kohlaziyo oluvela kwiinguqulelo zangaphambili, elityala lam, ndicinga ukuba izakuhamba nge $ 150.
Kucacile, ukuba ukuba sinemisebenzi emibini kuphela, xa kuphuculwa kwi-9 version siya kuba ne-activation ye-5 ... buhlungu! kwesoftware ephantsi.
Yintoni entsha entsha ye-9
Khange bathethe kakhulu okwangoku, ngaphandle kokuba kugxilwe kubo kukusebenza kunye neeprosesa zeMulticore. Uhlobo lwe-8 sele lunokusebenza kokusebenza kunye namakhadi eNvidia Cuda, apho iinkqubo zokusebenzisa izixhobo eziba lula, zisenza umatshini ungabonakali nje njengekhompyuter ephezulu kodwa kunye nesoftware esebenzayo. Konke ukuxhaphaza iinkqubo ezininzi zehardware kodwa kusetyenziswa kuphuhliso lwesoftware.
Kwaye xa ndithetha malunga nokwenza iinkqubo ezifanelekileyo, ndithetha oko bakwenzayo kwindlela ekuboniswe ngayo imodeli yendawo yedijithali eyayilungele ukuvelisa Imizuzu ye6 kwaye xa kusetyenziswa inkqubo eninzi yokuthunyelwa kwenziwayo imizuzwana ye-11.
Oku kukunciphisa ixesha lokucwangcisa, okwenza iGeotec iphumelele ngonyaka odlulileyo.
Kubonakala ngathi ukuphindaphinda kuya kugxila koku, kuxhaphaze isantya sokuqhubekeka ngoba kwingxelo yabo bazinikele kakhulu ekusombululeni imibuzo eqhelekileyo ngokubhekisele kumakhadi evidiyo angaxhaswa ngu-9 kunye nexabiso eliphantsi lamakhadi eNvidia. Ayizukuthetha kuphela iinkqubo kodwa nokuphathwa kakuhle kwefomathi yemephu apho iManifold ilawula phantse yonke into kwaye inokwandisa amandla okupapashwa kweenkonzo ze-IMS.
Okwangoku, kufuneka silinde.